Drake anozviitazve: nyowani kudhinda rekodhi | Ndinobva mac
Drake anozviitazve: nyowani yekutsikisa rekodhi
Drake akazviita zvakare. Mambo wekushambadzira mimhanzi akazviita zvakare. Canada rapper, munyori wenziyo uye mutambi yakatyora zvekare zvese zvinyorwa zvakagadzwa kusvika parizvino mukuburitsa zvigadzirwa mukati memaawa makumi maviri nemana ekutanga.
MuApple Music, pasina kuenda kumberi, rapper akakwanisa kumisikidza rekodhi nyowani, kubvira dambarefu rake idzva yaitepfenyurwa nevanyori vepuratifomu dzimwe nguva 89.9 mamirioni panguva yezuva rekutanga rehupenyu hwe disc. Rekodhi kusvika parizvino raive zvakare rakabatwa neyekare weCanada munyori wenziyo
Humwe Hupenyu, ndizvo zvinodaidzwa basa rake idzva, yakatsigirwa nhepfenyuro yeredhiyo Chikara 1 naOVO Sound Radio, ichitepfenyurwa zviripo nemugovera manheru, apo Drake pachake aiburitsa yega yega matraki ake matsva anoumba dambarefu rake idzva.
Kunyangwe paine kukanganisa kudiki, Humwe Hupenyu yakawana zvakare zvakafanana rekodhi mu Spotify, uko yakaburitswa kanopfuura mamirioni 61.3 panguva yezuva ravo rekutanga rehupenyu.
"Mahara Utsi" chinzvimbo seyakaimbwa rwiyo rwebasa rake nyowani, inofambidzana pachikuva ne "Portland" uye "Passion Fruit". Iyo albam parizvino inowanikwawo paTunes.
Mambo wekumhanyisa mimhanzi akaratidzazve kuti nei achizivikanwa pasi rese nezvazvo. Chiitiko chitsva munhoroondo yechangobva kuitika, uko kutenderera kunoratidzika senzira yakanakisa inowanikwa mumusika wanhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Drake anozviitazve: nyowani yekutsikisa rekodhi
iPhone (RED), iPad uye hapana chemaMacs
Photo Mhariri uye Mari Pro, mune yakanakisa kupihwa kwenguva shoma